Daacish oo Sheegtay Inay Weerarkeedii Ugu Horeeyay Ka Fulisay Dalka Soomaaliya (SAWIRRO)
April 26, 2016 – Ururka xagjirka ah ee ka dagaalama Dalalka Ciraaq iyo Suuriya ee Daacish ayaa wuxuu maanta shaaca ka qaaday in ciidamo iyaga taabacsan ay maanta weerarkii ugu horeeyay ay ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya.
Qoraal uu Ururka Daacish ku baahiyay barta uu ku leeyahay Twitter-ka, ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkan oo loo adeegay qarax lagu weeraray gaari ay leeyihiin Ciidanka Amisom.
Inkastoo aan qoraalka lagu xusin xilliga uu dhacay weerarka, ayaa waxaa hadana lagu xusay inuu ka dhacay Deegaanka Tareedisho, oo ku taalla wadada dheer ee xiriirisa Magaalada Muqdisho & Degmada Afgooye.
Wakaaladda wararka u baahisay Daacish ee Amaq ayaa tebisay in la burburiyay gaariga Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, balse maanay kala cadayn waxyeelada ka soo gaartay askarta Amisom.
Weerarka ay masuuliyadiisu sheegatay Daacish ayaa wuxuu noqonayaa kii noociisa ugu horeeyay oo sida ay sheegteen ay ka gaysteen gudaha dalka Soomaaliya, tan iyo markii bishii October koox ka go’day Al Shabaab ay baahisay inay si buuxdo ugu biirtay Daacish.
July 25, 2016 tuugahaladilo2015